Izimpawu zokuheha phakathi kwabasebenzi osebenza nabo | Amadoda anesitayela
U-Alicia tomero | 29/05/2022 10:34 | Izithandani Nezocansi
Osebenza nabo banganikeza izinkomba ezingamanga ukuze uqagele ukuthi uyayithanda nini leyo ndoda uzizwe ukhangwa nguwe. Lapho indoda inesithakazelo kowesifazane inikeza izimpawu ezisobala, kodwa izimpawu zokukhangana phakathi kwabasebenzi osebenza nabo zingaba ngokweqile uma kubhekwa ukuthi ukwelashwa kwansuku zonke kungadukisa.
Uma usebenza enkampanini enabasebenzi abaningi kungaba yindawo efanele yokubona lowo muntu omthandayo futhi umazi kabanzi. Indawo ilungile, kakhulu noma ngaphezulu kunalapho uphuma ukuyohlangana nabantu ezindaweni ezinjengamabhawa noma ama-nightclub. Kodwa okokuqala ake sazi ngokuningiliziwe kangcono ukuthi laba bantu ababili bayathandana yini.
1 Ukubukeka kuhlala njalo
2 Uma bebonana bahlale bemamatheka
3 ukuncoma akuntuli
4 Qaphela ukuletha ikhofi
5 Bazodla isidlo sasemini ndawonye
6 I-remp ehehayo ibonakala phakathi kwabo
7 Ziqondana ekungeneni nasekuphumeni komsebenzi
8 ukuziphatha okungajwayelekile
Ukubukeka kuhlala njalo
Abukho ubufakazi obungcono futhi uqaphele lokho ukubuka kuyaqhubeka futhi kuyaphindwa. Futhi akugcini lapho, kodwa bayahleka, bancokole futhi bathintane. Indlela abukeka ngayo kumelwe ithakazelise, hhayi ukubukeka okuvamile, kodwa kubhekwe indlela omunye umuntu abukeka ngayo uyabuka enganakile.
Naka futhi ukuqina kwalokho kubukeka futhi uma, ngaphezu kwalokho, zingabanjwa i-waiver futhi zingase ziphendule amakhanda ngoba omunye ubambe omunye ngesikhathi embuka. Lokhu kuchaza kungabhekwa uma ufuna ukuhlola ukuthi ukhona yini umuntu okuthandayo emsebenzini.
Uma lezi zenzakalo zenzeka, kufanele umnike le ncazelo yokuthi uyakuthanda. Uma kungumuntu obambe amehlo, kungenzeka ngifuna umzuzwana wokusabisa, kwazise ungumuntu ozethembayo nozimiseleyo.
Uma bebonana bahlale bemamatheka
Akusekho lokho nje ukubuka okuyimfihlo, kodwa bayakubona ukuthi ubuso obubodwa bukhanya kanjani lapho bubona obunye, ngisho ehluleka ukuzibamba emamatheka. Lapho umlingani ekuthanda, kusobala angayeki ukumamatheka njalo uma ngixhumana nawe.
Baningi abantu abathanda ukuba nomusa kwabanye abantu, ngisho nakwabasebenza nabo. Akukho lutho olungcono njengokuya emsebenzini uzolile futhi uzizwe ngokuzwana. Kodwa kungase kwenzeke ukuthi omunye wabalingani njalo khombisa ukuthopha nokuncoma okuningi kumuntu othize.
Imibukiso yothando ingaba khona, kuyabonakala, kodwa uma idlulisela okuthile okungaphezu komkhuba olula kufanele kuthathwe. njengomkhondo osolisayo. Ezimweni eziningi, ukuthopha akudingekile, kodwa uma kubonisa ukuthi awukwazi ukuvala umlomo futhi ukusho, kuwuphawu olucacile lokuthiuzizwe ukhangwa kakhulu.
Qaphela ukuletha ikhofi
Kungaba ikhofi, ibha yeshokoledi, ikhekhe elincane, ukudla okulula, kodwa iqiniso liwukuthi leyo mininingwane encane unalo nomuntu oyedwa kuphela. Akekho ozakwethu othola lowo mnikelo omncane owengeziwe futhi yilapho kufanele usole.
Bazodla isidlo sasemini ndawonye
Phakathi kozakwethu kungaqashelwa ukuthi ngezikhathi ezithile bayaphuma bayodla isidlo sasemini ndawonye, ​​kodwa nini baphuma njalo kuwuphawu olucacile lokuthi kukhona okwenzekayo. Ngisho noma ungafikanga ngesikhathi sesidlo sasemini ngenxa yokuthi omunye wenu ube nomhlangano, uyabona ukuthi omunye umuntu unake kangakanani umlethele ukudla kwasemini lokho kwakungathathwanga.
I-remp ehehayo ibonakala phakathi kwabo
Ukudlala kuyisihluthulelo, njengoba belindele ukumamatheka kunoma yisiphi isimo. Kunoma yisiphi salezi zikhathi akukho amagama kuphela kodwa othintana nabo abalula, ngezinye izikhathi baze babe nothando futhi abangenacala. Kungahlulelwa kuphela ngendlela oziphatha ngayo kwabanye osebenza nabo, njengoba iyona ndlela ezokunquma ngayo.
Ziqondana ekungeneni nasekuphumeni komsebenzi
Kuyaqondana impela lokho Abantu ababili bahlale bengena noma bephuma emsebenzini ngesikhathi esisodwa. Kuyenzeka futhi ngesikhathi sekhefu hhayi kanye noma kabili ngesonto, kodwa kuyabonakala ukuthi bakwenza nsuku zonke.
Kubheka nje ukuthi ngamunye wabo uziphatha kanjani izincazelo eziveza ukuthi bayathandana. Ungabona ukuthi abanye babo bakwazi kanjani ukuqala ukuzilungisa kakhulu, wafaka amakha.
Lapho besebenza ungase uqaphele indlela umzimba wabanye babo iphendukela komunye njalo. Bheka uma kwenzeka umphumela wesibuko phakathi kwakho kokubili. Lokhu kusho ukuthi lapho oyedwa walaba ababili enza okuthile, isibonelo, ukuthinta izinwele zabo, omunye umuntu ngokungazi ulingisa lokho omunye umuntu asanda kukwenza.
Sengiphetha, ukwazi ukuthi abantu ababili bayathandana yini emsebenzini kusobala ochungechungeni lwemininingwane esiyibukezile. Eziningi zazo kufanele zihambisane ukuze kubonakale. Kodwa iqiniso lokuthi bayathandana nokubonana nsuku zonke kungaholela ochungechungeni lwezingxabano nokungezwani, njengoba uthando olusemthethweni emsebenzini lungase lube nzima.
Indlela ephelele ye-athikili: Amadoda aSitayela » Kufanelekile » Izithandani Nezocansi » Izimpawu zokukhangana phakathi kwabasebenzi osebenza nabo